7 Soodajiyayaasha Biyaha ee ugu Wanaagsan si ay u iibsadaan 2018
Qorsheynta safarka Teknoloji & Gear
Isku day sidan biyaha dhalada ee ugu sarreeya
Dhalada biyaha dib loo isticmaali karo waa xal fudud oo lagu tuurayo dhalooyinka caaga ah, laakiin helitaanka midka ugu fiican ee baahidaada waxay noqon kartaa wax yar. Qaar ka mid ah dhalooyinka ayaa ku yaala dhinaca weyn, halka kuwo kale la daboolay. Qaar ka mid ah cayayaanka la dhisay, qaar kalena waxay la yimaadaan cayaaraha isboortiga. Waxaan helnay todobada dhalo ee ugu fiican si aad uhesho in aad ku qoyso sanadkan dhammaan hababkaaga dibedda.
Dhalada Nalgene Fahanka Biyaha Afka Biyaha ayaa heysta 32 wiqiyadood oo biyo ah waxayna ku habboon yihiin inta badan baakadaha biyaha qabta. Waa mashiinka bullaaciga ah, badbaadada BPA-da oo lacag la'aan ku ridi kara suunka dhabarka ama boorsada. Daboolka wuxuu ku xiran yahay naqshad la'aanta iyo dhalada oo dhan waxaa la yiraahdaa inay saameyn ku yeeshaan. Dhalada ayaa ah 8.25 inches, 3.5 inch oo ballaaran oo miisaankeedu yahay 6.25 wiqiyadood.
Waxaa la heli karaa midabo kala duwan, oo ay ku jiraan casaan, buluug, dabayl, casaan, guduud, jaalle, iyo sidoo kale jilayaasha super-ga, ubaxa iyo qalbiyada, iyo naqshad calanka. Waxaa laga sameeyey Maraykanka.
Kuwa doonaya caws caarad biyo ah, dooro tusaale ahaan CamelBak Eddy. Cabbiraadda biyaha qabow waxay haysaa wax ka badan 25 wiqiyadood oo ah dareeraha waxayna ku haboon tahay dadka badankooda, iyo sidoo kale boosaska gadaashooda. Dusha sare ee loo yaqaan 'topp' ayaa bixiya fursado fudud oo la qabadsiiyo iyo qalabka qaniinyada isku dhafan iyo qaniinyada qunyar socodka ah waxay bixiyaan socodsiin degdeg ah iyada oo aan la siinaynin dhalada dhalada ah (ku habboon dhaqdhaqaaqa waxqabadka degdega ah, sida socodka ama jimicsiga). Dhalada ayaa ah BPA-la'aan iyo mashiinka bullaacadaha oo ammaan ah. Noocyada waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo ah miraayado, blues, casaan, cagaarka, liinta iyo grays. Dhalada waa 10 inji, saddex inji oo ballaaran oo miisaankeedu yahay 5.4 wiqiyadood.
Haddii aad rabto in aad shaashadda ku qabato hargab ama qaxwahaaga kuleylkaaga kuleylka oo dhan, maalgashiga Hydro Flask Double Wall Insulated bacda ballaaran afka biyaha. La socodsii, inkastoo, saacado ka dib markaad buuxiso cabitaan kulul, weli wali waa duufaan, markaa fiiri qulqulkaaga. Hydro Flask ayaa sheegta in dareeraha qabowga qaboojin doono ilaa 24 saacadood; dareeraha kuleylka ah waxay kululaan doonaan ilaa lix saacadood. Dhalada biyaha la daboolay waxay ku timaadaa noocyo kala duwan (18, 32, 40 iyo 64 wiqiyadood) oo leh furitaan kasta oo ballaaran oo furan 2.28 inji. Qiyaasta ugu yar waa 8.1 inches, 2.91 inji oo ballaaran oo miisaankiisu yahay 11.6 wiqiyadood; qiyaasta ugu weyn waa 10.4 inji, 4.7 inji oo ballaaran oo miisaankeedu yahay 32.1 wiqiyadood. Dhalada ayaa laga sameeyaa birta aan saliida lahayn, waana mid aan ciriiri lahayn oo dhidid ah. Kabaha la isku haleyn karo waxaa ka mid ah daboolka daboolka ah ee daboolka ah, dabool furan oo cabbitaan ah iyo dabool caws ah oo loogu talagalay. Noocyada waxaa ka mid ah madow, buluug, cagaar, cawl, orange, cas, casaan iyo casaan.
Klean Kanteen Classic dhalada waa farsamo aan si fiican u dhejis ah oo la yiraahdo dabeecadda isboortiga si dhakhso ah, cabitaan fudud oo aan loo kala saarin. Koofurta sidoo kale waxay leedahay khadka loo yaqaan 'loop' oo si sahlan loo qaado ama si aad u xoqdo carabiner. Dhalooyinka waxay soo galaan 18, 27 iyo 40 wiqiyadood, iyadoo ugu yar ay dhalada ugu fiican tahay dhalaanka (8.9 inji oo sarre leh iyo 2.9 inji oo ballaaran, 6.4 wiqiyadood). Noocyada waxaa ka mid ah midab buluug, midab, casaan, orange, dabayl, jaalle iyo lacag oo rinjiga leh oo rinjiga leh.
Waxyaabaha Lifewactory 22-Dabeecadood ee Biyo-dhalada ah waa muraayad quraarad leh oo lagu ilaaliyo gacmo-gashi aan sifuduud lahayn oo sidoo kale ka caawisa kahortaga jabinta (inkastoo aan had iyo jeer is hortaagin). Daboolka fudfudud oo leh af dhuuban ayaa sidoo kale ka dhigaya dhalada loogu talagalay carruurta, laakiin waxay daadi doontaa haddii aan si fiican u xirneyn. Waxaa intaa dheer, qaabka qulqulaya iyo wareegga wareegga ah waxay dhalaalkani ka dhigi kartaa mid xiiso badan marka loo eego kuwa kale ee suuqa. Dhalada ayaa ah BPA-la'aan iyo mashiinka bullaacadaha oo ammaan ah. Noocyada waxaa ka mid ah lilac, buluug, raspberry, casaan, guduud, daahir iyo turquoise.
Markaad isku deyeyso inaad ku xirto nalalka fudud iyo minimalist intii suurtogal ah, Platypus PlusBottle waa xulashada ugu fiican. Waxay leedahay 34 wiqiyadood oo dareere ah oo miisaankeedu yahay 1.3 wiqiyadood, oo lagu daray, hal mar, oo isku laaban ama ku duub kuna buuxi baakadaada. Dhalada ayaa laga sameeyaa balaastik dabacsan, BPA-bilaash ah oo aan dabacsanayn. Waxaa loo qaabeeyey si fudud oo loo daadsho waxayna leedahay leyliye. Dhalada waa 11,5 inji iyo 6 inji oo ballaaran. Waxay ku timaaddaa daboolka isboortiga ama furka xiritaanka fudud.
Inkasta oo ay jiraan fursado jaban oo laga helo dhalo sifudud oo ku yaal suuqa, noloshii LifeStraw Go Water ma qarash badan, laakiin waa nidaam farsamo oo abaal-marin ah oo sharaxaya wax kasta oo aadan u baahnayn. Dhalooyinka ku jira nidaam sifo hal mar ah, biyaha wasakhaysan waxay ku shubaan dhalada, waxayna ku dhex mareen noloshii LifeStraw, kaas oo isticmaala xuubabka fibbiyada fareebka ah ee soo saaraya ku dhowaad 100 boqolkiiba bakteeriyada biyaha dhasha (sida E. Coli iyo salmonella) iyo feyruusyada protozoan biyaha (sida Giardia). Iyada oo nidaamka filimka laba-marna, waxaad helaysaa sifeyn isku mid ah, oo lagu daro filter carbon si loo yareeyo urta iyo koloriin. LifeStraw waxay baari kartaa ilaa 1,000 litir oo biyo ah; Kaabashka kaarboonka wuxuu filaa ilaa 100 litir oo biyo ah. Dhalada ayaa haysa 22 wiqiyadood oo ah dareeraha, waa mid aan ciriiri lahayn, BPA-la'aan oo ku yimaada caws iyo qalab loogu talagalay barejinta bilaashka ah. Dhalada waa 10 inji iyo 3 inji oo ballaaran; hal dhalo feylka hal-mar ah oo miisaankeedu yahay 5.9 wiqiyadood iyo dhalada sifudhiska laba-marxaladoodu waa 7.8 wiqiyadood. Filterska bedelka ah ayaa si gooni ah loo gadaa. Noocyada waxaa ku jira buluug, cagaar, cawl, casaan iyo guduud.
7 Baadiyaha Fudud ee ugu Fiican ee Lagu Bixiyo 2018
8 Shan Rugaha Xerooyinka Ugu Fiican ee Qalabka ah ee la iibsado 2018
Xulashada Koofiyadaha Xuquuqda ee Safarkaaga Kaliya
Miyaad Heli kartaa Hammock Inta U Socoto?
Dib u eegista: BigSkinny World Wall-Fold Wallet
8 Sarkaal Sigaarka ugu Wanaagsan ee Dumarka ah ee lagu iibsado 2018
5 Yoga Soo Celinta Bartamaha Aan Raadin Karo
Booqo Pittsburgh Creche inta lagu jiro Fasaxyada
Xaggee bay Walmartu ku yaalaan Hawaii?
Kids Bowl Free Albuquerque
Helitaanka Bandhigga Gobolka Wisconsin
Socdaalada Wakiilada ee hadda jira
Talooyinka Safarka Miisaaniyadda Bocas Del Toro
Lucca Top Hotel Hotels
The 5 Best Podcast Apps ee Safarrada
Buugaag ku saabsan Dhaqanka Hawaiian
Waa maxay Cimilada sida Filibiin?